LG G2 ၏တရားဝင် Android Lollipop Rom တွင်ပြန်လည် flash လုပ်ရန် Androidsis
အောက်ပါလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပါမည် LG G2 ၏တရားဝင်ပေါ်အခြေခံပြီး Lollipop Rom ကိုပြန်လည် flash လုပ်ပါ။ လူတော်တော်များများကပြန်သွားဖို့ကျွန်တော့်ကိုမေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကတော့အဲဒါကငါအတွက်ပါ AOSP Android 5.1.1 Rom AOSP Rom သည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမီးမောင်းထိုးပြရန်ထိုက်သည့်အမှားအယွင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့လေယာဉ်ပြေးလမ်းကိုအသုံးပြုနေစဉ် Wifi ၏အဆက်မပြတ်ပြတ်တောက်မှုမျိုး၊ မိုးသည်းထန်စွာကစားခြင်းများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုအလွန်အကျွံအပူလွန်ကဲခြင်းမျိုးမပေးခဲ့ပါ။
ဘာသာရပ်မ ၀ င်ခင်သင့်ကိုငါဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်သင်ကြားသွားမယ်ဆိုတာဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကြောင်းပြောပြဖို့လိုတယ် Recovery မှ LG Stock ကိုအခြေခံသည့် Lollipop Rom ကို flash လုပ်သည်, နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် D802 သာနှင့်သီးသန့်အကယ်၍ သင့်တွင်နောက်ထပ် terminal model ရှိပါက paperweight ကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းကိုလုပ်ရန်မစဉ်းစားပါနှင့်။
LG G2 အမျိုးအစား D802
Root နှင့် Recovery Modified TWRP
Recovery TWRP သည်၎င်း၏နောက်ဆုံး version နှင့် Bounced ကိုအဆင့်မြှင့်သည်.
nadroid backup လုပ်ထားပါ အမှု၌ငါတို့တစ်ခုလုံးကိုစနစ်၏ယင်ကောင်။
ဘက်ထရီက 100 x 100 ကိုအားသွင်း.
ပြုပြင်ထားသော TWRP Recovery ကို၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ် Bumped ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံခြင်းမရှိပါကလိုအပ်သောဖိုင်များသည် ၂၊ ၃ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သံသယဖြစ်ပါက Recovery ဖိုင်ကိုလည်း download လုပ်ပါ ငါဒီမှာရှင်းပြအဖြစ် install လုပ်ပါ.
TWRP ပြန်လည်နာလန်ထူ ၂.၈.၁ ဒီ link မှကူးယူရရှိနိုင်ပါသည်.
install လုပ်ရန်အတွက် Android Lollipop ကို Romဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Assics အဖွဲ့မှ Android Lollipop Rom ကိုအကြံပြုပါသည် ElGavillaတစ်ဦး Rom သည် HTC Mania ဖိုရမ်တွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်အကောင်းဆုံး Android ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောမလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ် Rom Assics V12 Plus အား, ၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်7ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားကတ ဦး တည်းဖြစ်နိုင်သည်ထက်ပိုရန်ညှိထားသည် အကောင်းဆုံး Roms စတော့ရှယ်ယာ Lollipop ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာ LG G2s အတွက်ရနိုင်တယ်။ ၎င်းကိုကူးယူရန်သင်တရားဝင်ဖိုရမ်သို့သွားရန်လိုအပ်သည် သို့မဟုတ်ဤ link ကိုနှိပ်ပါ.
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင် Rom installation နည်းလမ်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ငါပြသမည်။ သင်နောက်ဆုံးပေါ်တိုးမြှင့်ထားသောဗားရှင်းတွင် Modified Recovery ရှိရမယ်ဆိုတာသတိရပါ။ အကယ်၍ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည် Bumpeado ဟုတ်မဟုတ်မသေချာပါကကျွန်ုပ်သည်သင့်အားဤလိုင်းများအထက်တွင်ထားခဲ့သည့် Recovery TWRP Bumpeado ၏ zip ကို download လုပ်ပါ။ Recovery မှမည်သည့် Wipes မဆို flash လုပ်ပြီး Recovery mode ကိုပြန်လည်စတင်ပါ နောက်ပြီးသင်မျှဝေချင်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်။
အားလုံးသိရန်ဖြစ်နိုင်သည် ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံး Rom Lollipop စတော့အိတ်ငါအကြံပေးလိုပါတယ် Rom ၏တရားဝင်ချည်နှောင်ခြင်းကို HTC Maníaတွင်ကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိပ်ကမ်းများအတွက် extras နှင့်အသုံးဝင်သောအချက်များကိုလည်းရှာဖွေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » [ဗီဒီယို] LG G2 ၏တရား ၀ င်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ Lollipop Rom ကိုပြန်လည် flash လုပ်ရန်
Francisco ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါဒီနည်းလမ်းကိုလုပ်ပြီး Acura Pro2 V5 ကို install လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါကတစ်နေ့လုံးပေးနေခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီအခန်းကိုမှုတ် အကြှနျုပျ၏ G2 ဘယ်တော့မှပူလာတယ်။ သွားလာရန်အလွန်အစာရှောင်ခြင်း။ ဝိဇ္ဇာ